Bo Bo, Author at Shwe Khit Online TV - Page2of 18
Articles by Bo Bo
ကိုဗစ် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ လူနေမှုပုံစံများ
June 5, 2021 Bo Bo 0
၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကနေစတင်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ Coronavirus (COVID-19) ကူးစက်မြန်ရောဂါဟာ အခုထက်တိုင် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ဒုက္ခပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com COVID-19 ကြောင့် ကျောင်းတွေ၊ ရုံးတွေလိုမျိုး အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာဌာန အတော်များများဟာလည်း ပုံမှန်ဖွင့်ပြန်လည်ပြီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာလည်း အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီကူးစက်ရောဂါဆိုးကြီး ဘယ်အချိန်မှာမှ အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူမှတပ်အပ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါဆိုးကြီး သက်ဆိုးရှည်နေသရွေ့ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမယ့် လူနေမှု ဘဝတွေကို ခန့်မှန်းဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ ….. shwekhitonlinetv.com ၁။ မိမိအိမ်ဟာ […]
ဒူးရင်းသီးကြိုက်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အရာများ
June 4, 2021 Bo Bo 0
ဒူးရင်းသီးဟာ ကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေအဖို့ကတော့အနံ့နဲ့အရသာဟာ ဘယ်အသီးတွေနဲ့မှမတူဘဲ ထူးခြားကောင်းမွန်နေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြိုက်တဲ့သူအချို့အတွက်ကတော့ အနံ့တောင်ခံလို့မရတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဒူးရင်းသီးကြိုက်သူတွေကော မကြိုက်သူတွေအတွက်ပါ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ မိသားစု အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ဒူးရင်းသီးကြိုက်နှစ်သက်သူတွေရှိခဲ့ရင် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လည် ဝေမျှပေးကြပါဦးနော် …… shwekhitonlinetv.com ၁။ ဝိုင်ဖြူနဲ့ အယ်လ်ကိုဟော ဒူးရင်းသီးကို ဝိုင်ဖြူ နဲ့တွဲဖက်စာသုံးတာ၊ အရက်သေစာလို အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ အရာတွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးတာမျိုးက လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။ […]
ကော်ဖီကို သင့်တင့်တဲ့ပမာဏ သောက်သုံးရင် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ကော်ဖီဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လူကြီးလူငယ် အရွယ်သုံးပါးမရွေး သောက်သုံးတက်ကြတဲ့ အစားအသောက်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဒွန်တွဲရှိနေတယ်လို့ သိထားကြပေမယ့်အခုဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ ဆေးပညာရှင်တွေ သုတေသီတွေရဲ့ နောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကော်ဖီကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတဲ့စကားလေးကိုတော့ မမေ့သင့်ပါဘူးနော်။ shwekhitonlinetv.com ၁။ အမျိုးသမီးတွေ သေဆုံးရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာမှုတွေအရတော့ […]
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတော့မယ် လူတစ်ဦးရဲ့ လက္ခဏာများ
June 3, 2021 Bo Bo 0
မိမိကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ လွယ်ကူလှတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်က အဆုံးစွန်ကို ရောက်နေတဲ့အခါ သတ်သေဖို့ သေချာသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့လအချက်အလက်တွေအရဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ စက္ကန့် (၄၀) တိုင်း လူတစ်ယောက်ဟာ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com အများအားဖြင့်တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ အပြင်ပန်း ခန္ဓာကိုယ်မကျန်းမာမှုထက် စိတ်မကျန်းမာ(စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု) တဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေပြီး လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ရှာတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသေအချာ သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ […]
ကြောင်လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်အချက်များ
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေ ထဲမှာ ကြောင်လေးတွေကို ချစ်တက်တဲ့သူတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့​ဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာက ကြောင်လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာလေးတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဆက်လက်လေ့လာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …. shwekhitonlinetv.com ၁။ ပထမဆုံးအနေနဲ့​ကြောင်လေးတွေရဲ့ သက်တမ်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ ပျှမ်းမျအသက်က အများဆုံး (၁၅) နှစ်အထိသာ ရှင်သန်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ (Guinness World Record) Corduroy အမည်ရှိ ကြောင်ကတော့ […]
January 30, 2021 Bo Bo 0
လူသားတွေအနေနဲ့ မွေးဖွားဖြစ်တည်ရာမှာ မျိုးရိုးဗီဇသဘောအရ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိ တက်ကြတာဟာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိသိသာသာကြီးကွဲပြားနေရင်တော့ ထူးခြားမှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေနည်းတူပါပဲ အခြားသက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာလည်း ဒီလိုထူးခြားတဲ့ မွေဖွားဖြစ်တည်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ပုံမှန်နဲ့ မတူဘဲဘယ်လိုတွေ ထူးထူးခြားခြားကွဲထွက်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ ….. ။ shwekhitonlinetv.com ၁။ သဘာဝတရားကတော့ ဒီယုန်ကလေးကို အတော်လေးရှည်လျားတဲ့ နားရွက်ကြီးတစ်စုံ ပေးထားပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ၂။ ဒီကြောင်က မျက်နှာကို မတူညီတဲ့ အရောင်(၂) မျိုးနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံး(၂) လုံးရဲ့ အရောင်ကလည်းမတူညီပါဘူး။ ဒါဟာ Photoshop […]
January 26, 2021 Bo Bo 0
ကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့ လူသားတွေအားလုံးနီးပါးဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားကြသူတွေလို့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ပင်ပန်းကြီးစွာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ နေ့စဥ်ဘဝထဲကနေ ပြေးထွက်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ချင်ကြမှာလဲ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုတစ်ခါမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ သင့်တော်မယ့် ကမ္ဘာပေါ်ကနေရာလေးအချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ….. shwekhitonlinetv.com ၁။ Plougrescant – France ဒါကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းက Plougrescant မှာရှိတဲ့ ဘရစ်တနီရိုးရာအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Castle Meur လို့အမည်ပေးထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၆၁ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းတွေနဲ့ လေပြင်းတွေရဲ့ ဒဏ်ကနေ […]
ကြည့်ရှုသူတွေကို နှလုံးခုန်မြန်စေမယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကား (၁၀)ကား
January 25, 2021 Bo Bo 0
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကားတွေကိုမှ နှစ်ခြိုက်စွာကြည့်ရှုတက်တဲ့ သူတွေများ ရှိမလားမသိဘူးနော် …. ဒါဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် ဇာတ်ကားလေးတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်တမ်းတွေအရ ဒီဇာတ်ကားတွေက ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။shwekhitonlinetv.com ၁၀။ The Visit : (79–100) bpm The Visit လို့အမည်ရတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဘက်ကာဆိုတဲ့ (၁၅) နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ တိုင်လာဆိုတဲ့ (၁၃) နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတို့ကိုအဓိကထား […]
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံထဲက နေရာ (၁၀) ခု
January 24, 2021 Bo Bo 0
ရွှေခေတ်ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့က စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘဲ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင််းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြပေးဖို့တောင်းဆို ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com ဟုတ်ကဲ့ အခုဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ …ခရီးသွားလာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စစ်တမ်းတွေကို ပြုစု ဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ Touropia ဆိုတဲ့ Website လေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွာတွေကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံက အရပ်ဒေသ (၁၀) ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ အကြောင်းအရာလေးကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ပေးပါဦးနော် … shwekhitonlinetv.com […]
လူတိုင်းကို အံ့သြသွားစေမယ့် မော်ဒယ်မလေးရဲ့ တက်တူး မထိုးခင်က ဓာတ်ပုံများ